IINGUBO ZOMTSHATO WASELWANDLE EZINGAMA-35 ZIGQIBELELE UMSITHO WAKHO WOLWANDLE - IFASHONI
Eyona Ifashoni Iingubo zomtshato waselwandle ezingama-35 zigqibelele uMsitho wolwandle
Iingubo zomtshato waselwandle ezingama-35 zigqibelele uMsitho wolwandle
Ezi lokhwe ziyamangalisa kwaye ilungele isanti. Ukuhlaziywa ngoMatshi 23, 2020
Ngelokhwe yomtshato elwandle, ukusebenziseka kubalulekile. Njengazo zonke ezinye izinto ezichaphazela ulwandlekazi eziya ekucwangciseni i umtshato waselwandle -Ukusuka ekubekeni iindwendwe ukuze ilanga lingabikho emehlweni abo ukuya ekuphuhliseni isicwangciso esifanelekileyo sokugcina imo yezulu-ukukhetha iimpahla zomtshato ezilungele ulwandle kunokuba nzima, ngakumbi xa ujongene nezinto ezinjengentlabathi, ilanga kunye nomoya ongalindelekanga.
Pha are , nangona kunjalo, izikhokelo ezimbalwa ezilula ukugcina engqondweni. Umzekelo, tsiba isinxibo sebhola esisesikweni okanye uloliwe wecawe (kuba baya kukusinda), kwaye ukhethe amalaphu alula nomoya avumela ukuhamba ngokulula kwaye unikezele ngokuphefumla (njenge chiffon kunye nesilika). Kwakhona, khetha uyilo oluneziketi ezinxibayo, izilayidi kunye neeleyisi ukugcina ukuhamba komoya kunye nentuthuzelo. (Enye into ekufuneka uyiqaphele? Izithende eziphakamileyo kunye nesanti azixubeki-khetha i-wedges okanye iiflethi endaweni yoko, ujonge ezinye ezintle Ukukhetha izihlangu zomtshato elwandle apha .)
Ezi zikhokelo sisiqalo nje xa kufikwa ekukhetheni isinxibo somtshato elwandle esisebenzela umbono wakho. Fumana ezinye zeengubo zethu esizithandayo kwisitayile ngasinye-ukusuka kwilokhwe yomtshato yaselwandle elula ukuya kwezesondo-ngqo ukusuka kwimizila yeVeki yeBhasikithi yeFashoni, ngezantsi.
Iingubo zoMtshato zoMtshato waselwandle
Iingubo ezimfutshane zomtshato waselwandle
Iingubo zokunxiba eziqhelekileyo zoMtshato
Ukudityaniswa kweLokhwe yokuNxiba yoMtshato
Iingubo zomtshato zaseLace zaseLwandle
Izambatho zoMtshato zaseLwandle eziMdaka
Iingubo ezilula zomtshato waselwandle
Ukuba nomtshato waselwandle akuthethi ukuba kuya kufuneka uye kude noyilo lwefashoni ephezulu. Fumana iilokhwe zomtshato zaselwandle ezinesitayile esivela kwabanye babaqulunqi abaphambili kwimizi-mveliso yomtshato, apha.
Intle kangakanani le chiffon kunye ne-halter-neck combo?
Isinxibo somtshato waselwandle ngu-Amsale
Ilaphu elikhanyayo nelipholileyo lale gown yeAmsale linika lo mtshakazi indibaniselwano egqibeleleyo engaqhelekanga.
Awungekhe uhambe gwenxa uyilo olucocekileyo, olungenamtya.
Isinxibo somtshato waselwandle nguViktor noRolf
Umphezulu ongenamtya wale gown kaViktor kunye noRolf unika ilokhwe ubuchule obunobuqili. Yongeza isacholo esimenyezelayo namacici ejeweled ukongeza ngaphezulu pop kule nkangeleko.
Sifumana i-vibes enzulu ye-mermaid kolu luyilo lwe-spaghett-strap.
Isinxibo somtshato waselwandle ngu IHayley Paige
Iifowuni ze-Dainty zinceda le ngubo yeHayley Paige. Isiketi esikhanyayo siya kulungela imeko yolwandle.
Uyilo oluphakamileyo kunye nokuyila kwamagxa kuqinisekisiwe ukukugcina upholile kwaye upholile ngemini eshushu.
Isinxibo somtshato waselwandle nguBliss nguMonique Lhuillier
Olu lonwabo ngu-Monique Lhuillier gown ifumana ibhalansi egqibeleleyo yolwandle oluqhelekileyo kunye nobunono obunqabileyo.
Imitshato yaselwandle inokuba yinto eqhelekileyo kwaye ingakhathali. Iilokhwe ezimfutshane zomtshato waselwandle zigqibelele kuba ziziva zibuyile, kwaye phelisa umba wesanti kwimiphetho yakho. Jonga ezinye zeelokhwe zethu zomtshato zaselwandle esizithandayo ezinamathele ekumanyeni okuhle kunye nokungaqhelekanga.
I-hemline ephezulu ithetha ukuba awunakukhathazeka ngamaza aphezulu.
Isinxibo somtshato waselwandle ngu-Amsale omncinci oMhlophe
Olu khetho lokunxiba ngesibindi ngu-Amsale Little White Dress luya kujika lube yintloko kwaye kukuncoma okugqibeleleyo kumtshato wolwandle omnandi nolutsha.
Ifom efanelekileyo, uyilo lobude bamadolo luziva lu-oh-nhle.
Isinxibo somtshato waselwandle ngu DB Studio
Ngubani othi ilokhwe yomtshato ayinakuba mfutshane? Ayilonombolo intle ye-lace evela kwi-Studio yeDB.
Uyilo lobude beti onje uziva unqabile ngokwaneleyo elunxwemeni okanye igumbi lebhola.
Isinxibo somtshato waselwandle nguRandi Rahm
Umaleko wale gawuni kaRandi Rahm unika isinxibo isibheno esininzi esibonakalayo, njengoko kunjalo kwipateni ethe nkqo kwibhodi engenamikhono nakumphetho ngamnye.
Ngaba awuyikucinga nje ukuba uyilo lukaJustin Alexander lubetha umoya?
Isinxibo somtshato waselwandle ngu-Justin Alexander
Umqala onzulu wale lokhwe ungena kwisiketi esigcweleyo esifana neentyatyambo zentyatyambo?
Zama i-lacy kunye noyilo lobufazi njengale yomtshato wakho waselwandle.
Isinxibo somtshato waselwandle nguGalina
Imikhono eqhotyoshelweyo kunye ne-hem zinika le ngubo inesitayile nguGalina nje pop eyifunayo. Ukusika ubude beti kwenza le ilokhwe yomtshato yaselwandle egqibeleleyo.
Ubume obuqhelekileyo bomva wolwandle benza ukuba ukhethe ilokhwe yomtshato engafunekiyo kube lula (kunye nendawo enendawo). Sukwenza impazamo ngokudideka 'oqhelekileyo' kunye nesithukuthezi- jonga iilokhwe zethu zomtshato esizithandayo ezihlala zintle kwaye zithandana.
Isinxibo esilula, esinemiqolo efana nale ilungele umtshato waselwandle (okanye nayiphi na ishawa yomtshato).
Isinxibo somtshato waselwandle yi-Whistles
Ipateni entle yale lokhwe yomtshato nguWhistles iyenza ibonakale. Ingubo yobude beti iya kujongeka intle njengoko wena neqabane lakho ujikeleza ngexesha lomdaniso wakho wokuqala.
Ibhinqa, i-Tinkerbell-ephefumlelweyo ilokhwe yomtshato elwandle ilungele umtshakazi oyintombazana.
Imikhono ye-bodice efanelekileyo kunye nemikhono ye-wispy yale Am lokhe ilokhwe encinci i-Amsale iyinika ukubonakala okuhle. Ilaphu lokukhanya liya kukunceda uhlale upholile elunxwemeni.
Ukusikwa kwamagxa kunye nesiketi esithandwayo kule lokhwe yomtshato yaselwandle engaqhelekanga iya kukugcina upholile imini nobusuku.
ngowuphi umnwe ngumsesane womtshato
Yintoni ongayithandiyo malunga noMarryn Monroe-ophethe ingubo emhlophe emhlophe evela kwi-Whistles?. Vumela loo sketi ibhabhe njengoko ujikeleza ubusuku kumgangatho wokudanisa okanye phantsi kweenkwenkwezi.
Yonyusa ilokhwe yomtshato elunxwemeni engaqhelekanga ngolu hlobo enezixhobo zeenwele eziphezulu kunye nala macici.
Intle kwaye ingaqhelekanga, le ilokhwe nguGalina ivumela ithuba lokubonisa izihlangu zakho. Imikhono yekepusi kunye nentamo ephezulu nayo iyayenza ingubo eyahlukileyo neyonwabisayo.
Ukufumana ilokhwe yomtshato ogqibeleleyo kunye nobukhulu obugqibeleleyo kulula kunangaphambili. Ukukhanya kunye nokuhonjiswa kunye nobukhulu beelokhwe zomtshato elunxwemeni ziza ngeendlela ezithandekayo nezithandanayo ezonyusa inani elithandekayo.
Zama ilokhwe emtsalane (kunye nobukhazikhazi) enxibe njengale yomtshato wakho waselwandle.
Isinxibo somtshato waselwandle nguTheia
Iipateni ezintle kule gown nguTheia ziya kutsala onke amehlo kuwe. Yongeza isigqubuthelo ukuze uyenze ibe mhlophe okanye isiqwenga seenwele esenza ukuba ujongeke ngakumbi.
Le lokhwe yomtshato elunxwemeni inokuba nemikhono emide, kodwa iiphaneli zamehlo ezikhulu ziyalingana.
Isinxibo somtshato waselwandle ngu Ngaba uWillowby nguWatters
Le gawithi yiWatters ikunika ibhodi eboshwe kakuhle kunye ne-v-neckline yothando.
Usengaya kwisiketi esipheleleyo ukuba unomtshato waselwandle ukuba nje ilaphu lilula kwaye linomoya opholileyo.
Isinxibo somtshato waselwandle ngu Amanzi
Isinxibo somtshato waselwandle ohamba ze sinika i-bohemian vibe efanelekileyo.
Isinxibo somtshato waselwandle ngu Wtoo nguWatters
Ukuhonjiswa okuhle kule Wtoo yiWatters gown kuyibeka ngokwahlukileyo kwaye kuya kongeza i-vibe ephucukileyo kumtshato wakho waselwandle.
Uyilo oluncinci lwe-spaghetti-strap luyakuqinisekisa ukuba amagxa akho ahlala epholile.
Ukukhetha i-lace kumtshato waselwandle-kunokuba ilaphu elinzima okanye imihombiso emininzi-yongeza ukuphefumla kuyo nayiphi na impahla. Jonga iilokhwe zomtshato zaselwandle ezinelokhwe zothando, ezimnandi kunye nemvakalelo yeediliya, ngezantsi.
Isinxibo seLace esithandekayo sihombisile, sihle kwaye silungele ulwandle ngokupheleleyo.
Isinxibo somtshato waselwandle nguGrace Loves Lace
Ukusikwa okumnandi njengale kuya kukugcina upholile kwaye jonga ngokumangalisayo.
Isinxibo somtshato waselwandle ngu Ixabiso
Ukuba ungumtshakazi we-boho, zama ilokhwe yomtshato yaselwandle engaphandle kwegxalaba njengale (ibhangqiwe kunye okanye ngaphandle kwentsimbi yomququ).
Awungekhe uhambe ngokungahambi kakuhle nge-neckline ye-illusion. Yothusa, akunjalo?
Isinxibo somtshato waselwandle nguJenny Yoo
Isiphelo esisezantsi kakhulu silungele umtshato waselwandle.
I-bodice e-corseted iya kuhlala iziva ngathi yeyokuthandana kunye nevintage-esque. Ewe Nceda.
Umtsalane welanga kunye nokuntywila emanzini ayisiyonto nje ingabalulekanga — kuyathandeka ngokuthe ngqo. Yamkela umona ngokukhetha ilokhwe yomtshato waselunxwemeni emnandi evakalelwa ngathi iyimfashini. Fumana iintandokazi zethu ngezantsi.
Musa ukoyika ukubonisa ulusu ukuba unomtshato waselwandle.
Isinxibo somtshato waselwandle nguWtoo nguWatters
jordan rodgers kunye nomtshato kaJojo
Uya kuziva ngathi uthixokazi wamaGrisi kolu luyilo lweTheia lungenamsebenzi.
Uyakwenza ulwandle luzive lushushu nangakumbi xa unxiba uyilo oluhle lwe-Eisen-Stein.
Isinxibo somtshato waselwandle ngu-Eisen-Stein
Imfesane, i-sheer kunye nokuma ngokufanelekileyo, le lokhwe yomtshato elwandle ibonisa ukuba usenokubonakala unencasa kwaye umhle ngelixa ubonakalisa ulusu.
Isinxibo somtshato waselwandle ngu Pnina ndabuya
Le lokhwe yinkcazo yokuhlangana okulula-kwaye sithanda kakhulu.
Isinxibo somtshato waselwandle ngu UBertha
Akunyanzelekanga ukuba usebenzise imozulu efudumeleyo, yolwandle njengesizathu sokunxiba ilokhwe yomtshato elunxwemeni ethandekayo enje (kodwa ngokuqinisekileyo ayilimazi ityala lakho).
Isinxibo somtshato waselwandle ngu UAlexandra Grecco
Umdaka othambileyo, omile kakuhle oxutywe nomoya opholileyo, isiketi esicocekileyo yindibaniselwano efanelekileyo yesinxibo somtshato elwandle.
Isinxibo somtshato waselwandle ngu UJenny Packham
I-Streamlined, ilokhwe yomtshato yaselwandle elula ilungele umsitho wolwandle (kwakhona, ngekhe ufune ukusindwa zizinto ezinje ngemihombiso enzima kunye namalaphu ahonjisiweyo). Fumana ezinye zeempawu ezintle zomtshato waselwandle ezintle kakhulu esizithandayo, apha ngezantsi.
Iinkcukacha zamagxa zongeza umnxeba ogqityiweyo wokugqibela kule gown ilula ye-Savannah Miller.
Isinxibo somtshato waselwandle ngu USavannah Miller
Ngaba awufane ucinge nje ukuba lo loliwe ukhethekileyo ubhabha emoyeni nakumanzi olwandle?
Isinxibo somtshato waselwandle nguDanielle Frankel
Le gown intle iya kubonakala ifanelekile ngamacici esitetimenti kunye neenwele ezixineneyo.
Besikhe sayitsho kwakanye kwaye siza kuyithetha kaninzi: Awunakuhamba gwenxa ngesinxibo esimangalisayo ngosuku lwakho lomtshato.
Isinxibo somtshato waselwandle nguDana Harel
Ngoku ukuba unemibono emininzi yokunxiba emtshatweni waselwandle, lixesha lokuba uqalise ukucwangcisa wonke umtshato wakho waselwandle.
Isiqithi sekhitshi esikhulu
Imitshato iyakwenzeka ngo-2021
izipho best ukuba umtshakazi ukuba
eyakhelwe kwiindawo zokutya kwasekuseni
Ungamcebisa njani umfana